Wasiir Maaliyada Soomaaliya oo Muqdisho kula kulmay Bella Bird (Daawo Sawirada) – WIDHWIDH ONLINE
Wasiir Maaliyada Soomaaliya oo Muqdisho kula kulmay Bella Bird (Daawo Sawirada)
Published: February 12, 20198:46 pm
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay Haweeney Madax uga ah Bangiga Aduunka qaar kamid ah Wadamada Qaarada Afrika.
Bella Bird oo ah Madaxa Bangiga Aduunka ee Wadamada Soomaaliya, Tanzania, Burundi iyo Malawi ayaa magaalada Muqdisho u timid sidii ay wax uga ogaan laheyd Horumarka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha oo guulo laga gaaray.
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya ayaa kala hadlay Bella Bird arimo kala duwan ay kamid tahay horumarka iyo isbadalka Maaliyadeed ee dalka ka jira, waxa ay sidoo kale labada dhinac kawada hadleen xoojinta wada shaqeynta.
“Waxaa sharaf ii aheyd inaan maanta xafiiskeyga ku qaabilo Bella Bird oo ah Madaxa Bangiga Aduunka ee Wadamada bariga Afrika qaar sida, Somaliya, Tanzania, Burundi iyo Malawi, Waxaan ka wada hadalnay horumarka iyo isbadalka Maaliyadeed ee dalka iyo sidii aan u xoojin laheyn wada shaqeynta aan la leenahay World Bank.”ayuu yiri Wasiir Beyle.
Magaalada Muqdisho ayaa marar badan waxaa booqasho ku yimid madax sare oo katirsan Bangiga Aduunka, kuwaa oo qiimeyn ku sameenayay kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo isbadalka ku yimid hanaanka Maaliyadeed ee Soomaaliya.
Xiisad dagaal oo ka taagan Gobalka Sool & Somaliland iyo Puntland oo ciidamo badan
Published: January 29, 20187:15 am